မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): ဖေ့ဘွတ်က ဖလမ်ဖလမ်းတွေကို ဖေ့ဘွတ်မသုံးသော သူများသိစေဖို့ 
အားလုံး ၂၀၁၂ သင်္ကြန်မှာ ဖလမ်းဖလမ်ထနေတာတွေပါ...ဖေ့ဘွတ်မှာ ပလူပျံနေလို့ 
ကော်ပီ ပြန်ယူလာတာပါ. သူတို့ မှဝတ်တော့လည်း ဒို့ တင်ရတာပေါ.....................။
Author Anonymous at 2:26:00 AM
Labels: သိသော်ဖော်သွား မသိသူကြော်စား
ဒါမျိူးဆို ဖိုးမောင်တို့က အကုန်သိတယ်နော်..
ဆိုးဝါးပါ့.. ကိုယ့်ညီမ အစ်မသာဆို ဖနောင့်နဲ့ချည်းပေါက်မှာ....။
အောင်မှာ ဖွားသကြားကများ တူတိပီးမှ သားတို့ က သိရတာပါဟွင်းဟွင်း...ဦးလေး မသုံးလုံးကလည်း ဖနောင့်နာတာပေါ့ အမီးဆွဲကိုင်ပေါက်လိုက်ရမှာ..၀တ်ထားတာတွေ လန်ထွက်နေတာပဲဗျာ..မြန်မာတဲ့
Phoo Chwar said...
အဲဒီ ဖလမ်းဖလမ်းတွေ ကြည့်ပြီး
အိပ်ရမှာတောင် ကြောက်တွားပီ ........
အိပ်မက်ဆိုးတွေ မက်မှာ ကြောက်ရို့ အဟိ ...........
မြန်မာမလေးတွေတော်တော် ခေတ်မီလာပြီနော်ဒီမိုကရေစီသာရ လို့ကတော့ထိုင်းလောက်ကသနားတယ်
အော်... မြန်မာနှစ်သစ်က ရေကစားတာလား....
ရှိသမျှ ပစ္စည်း ချပြကြတာလား......
နောက်ဆို..တို့ ယောက်ျားတွေက ချစ်ရေးဆိုစရာတောင်လိုတော့ မယ်မထင်ဘူး..:D..ကဲ သာကဲ...မင်း ဂလု မချိုက်နဲ့ ..ဝေး ဟေး
ဖြဲ သာ ဖြဲ ..မင်း မချုပ်နဲ့ ...အိုးလေး လှုပ်ပါဟေ့...ငပိအိုးလေး လှုပ်ပါ့ဝေ့း..............:D :D
အမော်မပြေတဲ့အပြင်ရေငတ်တယ် မောင်လေးရ..ကလေးကလေးလိုနေပါကွာ..ဟိဟိ မကောင်းပါဘူး....ခင်ဗျားတို့ အတွက် ကျနော်ကောင်းစားဖို့ ပြောနေတာပါ...ပုံဆရာမောင်..တိန်
ငိငိငိ ဘာဘဲ ကြောကြော ဘာ မြန်မာ က သေနာ ဂေါင်တွေ (တနယ်ချင်း)တွေကတော့ အဲ့ ဒါ တွေ ကြည့် ပြီး ပွဲ ခံ နေမှာ ပေါ့ အာဟင့် တို့တွေမှာ သာ....:(:(:(
နောက်ကိုဒီထက်ဆိုးလာနိုင်သေးလား မြန်မာယည်ကျေးမှု့ ကိုထိမ်းသိမ်းပေးကြပါရန် .............................
နောင်နှစ် ကြရင်ဒီလို မဖြစ်၇အောင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ဥပဒေ တောင်ထုတ်သင့်နေပြီ
Oh! That is very bad photo, for Generation that will be come the very bad country in the world.
သွားပြီ မြန်မာပြည်မှာ ပြည့်တန်ဆာတွေတော်တော်ပေါနေပါလား..... ရိုးရာသင်္ကြန်မှာ မြန်မာမလေးတွေရယ် အရှက်တွေကို အရက်နဲ့ရောလိုက်ကြပြီလော..
ဒါတွေ တရားခံက ကိုးရီးယားကားတွေကြောင့် အများဆုံးပါမယ်...MWD. MRTV.MRTV-4 တွေတော်တော် သောက်သုံးမကျတဲ့လိုင်းတွေ... ဒီကောင်တွေကြောင့်အများဆုံးပါမယ်..အတုယူမှားနေတဲ့ မြန်မာမလေးတွေကလည်းမှားတယ်... ကျွန်တော်တော့ဒီလိုင်းတွေကိုကြည့်မရဘူး.. ဒီလိုင်းတွေပိတ်ဖို့ လွှတ်တော်မှာ တင်သင့်တယ်
မသိစိတ်တွေရဲ့ခေါ်ဆောင်မှုကို ခံယူခဲ့ကြပြီ။ မကောင်းမှုဆိုတာထက် ဒိဌမကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်းပါပဲ။ အခင်းမရှိတဲ့ကြမ်း လိုပါပဲလား။ ပရမ်းပတာနဲ့ စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းလိုက်လေခြင်း။အကွတ်မရှိတဲံ့တောင်းလိုပဲ ပလုတ်ပလောင်းနဲ့ ကောင်းကောင်းကို ပလဲနေတာပဲကွာ။
ခောတ်မီလာတယ်လို.ဆိုရမယ်နိုင်ငံခြားေ၇ာက်သူတွေတောင်သူတို.လောက်မကဲရဲဘူးဟဲဟဲ အပေါ်ပြတ် အောက်တိုနဲ. ဂေါ်ကိုကိုတွေကို ကြိုဆိုနေကြသလား မရွှေမမတို.ရယ်
မိုက်တယ်ဟေ့ လန်ထွက်နေတာပဲ ဟီးးးးးးးးးးးးးးး သူတို့ကတော့ဘယ်လိုနေမလဲ မသိဘူး
အရမ်းကိုကောင်းတာပဲ သူတို့တော့ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူး အရှက်မရှိတဲ့ဟာတွေ
လူဆိုတာအရှက်မရှိရင် .....Animal နဲ့ ဘာမှမကွာခြာတော့ပါဘူး